ကျောက်ဘီလူး၏အိမ်ကလေး - နတ်သမီးဥယျာဉ်
ကျောက်ဘီလူး ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင်0ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
ဘလော့ ပို့(စ်) (7)ဖိုရမစာပေများ (6)အဖွဲ့များ (2)ဓါတ်ပုံများ (6)ဓာတ်ပုံဖိုင်ဗီဒီယိုများ (3) ကျောက်ဘီလူး“အကြိုက်များ ကျောက်ဘီလူး၏သူငယ်ချင်းများ
အားလုံး ကြည့်ရန် သီချင်းပဒေသာ
Loading… ကျောက်ဘီလူးဝင်ရောက်သော အဖွဲ့များ
အဖွဲ့ဝင် 97 ဦး
အဖွဲ့ဝင် 771 ဦး
ချက်ခန်းတာဝန်ခံ+! may la won !+အလင်းချစ်သူ သည် ကျောက်ဘီလူး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"ဘ****
လ၀န်းအိမ်လာမလည်လို့ဘီလူးကိုချိတ်ချိုးတယ်ဟွန်း"Nov 6, 2013အထူးမန်ဘာ+!!!♥♥နှင်းဆီသခင်မ♥♥!!!+ သည် ကျောက်ဘီလူး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"ကိုလေးအိမ်မှာကိုလေးနဲ့တူတူလာအိပ်မယ် နှင်းကိုဖတ်ထားပေးသိလားရန်ကုန်ကိုလာရင် ကိုလေးကို နှင်းအဲံ့လိုလေးဖတ်ပီကြိုမယ်နော်အာဘွားနော် ကိုလေး"Nov 3, 2013Admin+!! ★♥Sky Heart♥ ★!!+ သည် ကျောက်ဘီလူး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်" "Oct 30, 2013အထူးမန်ဘာ+!!!♥♥နှင်းဆီသခင်မ♥♥!!!+ သည် ကျောက်ဘီလူး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"နှင်းလက်ဆောင်လာပို့တယ်နော် ကိုလေး အရာရာတိုင်း အဆင်ပြေပီ ပျော်ရွှင်နိုင်ါစေနော်ကောင်မလေးချောချောလေးခေါ်လာပေးမယ် ယောင်မတော်မလို့လေငှက်လေးတစ်ကောင်းလိုဘဲနှင်းကလေ လှတ်ယမှတ်လား နှင်းပုံလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့မယ်နော်
"Oct 27, 2013Admin+!! ★♥Sky Heart♥ ★!!+ နှင့် ကျောက်ဘီလူး သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားပါပြီOct 27, 2013Admin+!! ★♥Sky Heart♥ ★!!+ သည် ကျောက်ဘီလူး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"
"Oct 24, 2013+!! hlain yati+!! သည် ကျောက်ဘီလူး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"လာလည်တယ်နော်သယ်ရင်ပျော်ရွှင်ပါစေ"Oct 24, 2013အထူးမန်ဘာ+!!!♥♥နှင်းဆီသခင်မ♥♥!!!+ သည် ကျောက်ဘီလူး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"နှင်းလာလည်တယ်နော် နှင်းအိမ်လေးမှာ မအိပ်ရဲလို့ အစ်ကိုအိမ်မှာ ခနလာအိပ်မယ်နော်နှင်းအတွက် ပျော်ရွှင်ရပါတယ် အစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နော်အစ်ကိုအိမ်မှာလလေးသာနေအောင် အလှဆင်းပေးခဲ့မယ်နော်"Oct 22, 20132nd Admin+ !! (သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်မလေး)+++ သည် ကျောက်ဘီလူး ဘလော့ပို့(စ်) ကြွေးဟောင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်Oct 21, 20132nd Admin+ !! (သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်မလေး)+++ သည် ကျောက်ဘီလူး ၏ဘလော့ပို့(စ်) ကြွေးဟောင်းတွင်မှတ်ချက် ရေးသားခဲ့ပါသည်"ခံစားအားပေးသွားပါတယ်နော်"Oct 21, 2013active member+ !!! (မိကဝေ♥♥မိန်းမဆိုးလေး)♥♥ သည် ကျောက်ဘီလူး ဘလော့ပို့(စ်) ကြွေးဟောင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်Oct 21, 2013active member+ !!! (မိကဝေ♥♥မိန်းမဆိုးလေး)♥♥ သည် ကျောက်ဘီလူး ၏ဘလော့ပို့(စ်) ကြွေးဟောင်းတွင်မှတ်ချက် ရေးသားခဲ့ပါသည်"ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည်.ပါစေ"Oct 21, 2013အထူးဘလော့ဂါသူရိန်မြင့်မြတ် သည် ကျောက်ဘီလူး ၏ဘလော့ပို့(စ်) ကြွေးဟောင်းတွင်မှတ်ချက် ရေးသားခဲ့ပါသည်"ကောင်းလိုက်တဲ့အရေး အတွေး အားပေးပါတယ်ဗျာ။
"Oct 21, 2013အထူးဘလော့ဂါသူရိန်မြင့်မြတ် သည် ကျောက်ဘီလူး ဘလော့ပို့(စ်) ကြွေးဟောင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်Oct 21, 2013ကျောက်ဘီလူး postedavideoစွယ်တော်ရွက် မနော""Oct 20, 2013 0
ကျောက်ဘီလူး သည် + !!ဆုမြတ်ခိုင်♥♥venuslay♥♥ ၏ဘလော့ပို့(စ်) ကလေးများအတွက် လိုနေတဲ့ ကရုဏာလက် (venuslay)တွင်မှတ်ချက် ရေးသားခဲ့ပါသည်"ကလေးဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ရတနာဆိုမမှားပါဘူး
ကရုဏာလက်တွေနဲ့ပျိုးထောင်ပေးသင့်ပါတယ်"Oct 20, 2013 နောက်ထပ် RSS
8:00pm အချိန် အောက်တိုဘာလ 19, 2013 တွင် တင်ခဲ့သည် 10 မှတ်ချက်
အိမ်ပြန်ချင်တယ်… ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် အဝေးရောက်ချစ်သူ
8:39pm အချိန် အောက်တိုဘာလ 8, 2013 တွင် တင်ခဲ့သည်5မှတ်ချက်
တနေရာတော့ချန်ထားပေးပ… ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် လူနေချုံကြား စိတ်နေဘုံဖြား
3:14pm အချိန် အောက်တိုဘာလ 8, 2013 တွင် တင်ခဲ့သည် 1 မှတ်ချက်
ဘီလူး သားဒါတွေဘယ်တုန်းကစားလို့လဲ တော်ပြီသွားမယ်မုန့်ဖိုးပေး
ဘီလူး … ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် ကြေကွဲခဲ့တယ်
4:19pm အချိန် အောက်တိုဘာလ 7, 2013 တွင် တင်ခဲ့သည်5မှတ်ချက်
ကြရင်..........… ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် ဘလော့ တင်ရန်
အားလုံး ကြည့်ရန် အမှတ်တရ မှတ်ချက်စကားများ (မှတ်ချက် 19 ခု)
9:15pmတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2014မှာ, Admin★☆ maw gyi ★☆ ပြောကြားခဲ့သည်က… 11:10pmတွင် နိုဝင်ဘာလ 6, 2013မှာ, 2nd Admin+ !! (သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်မလေး)+++ ပြောကြားခဲ့သည်က… လာလည်သွားတယ်နော်မိကျောက်မတွေ့တာတောင်ကြာပီနေရောကောင်းရဲ့လား ငါသတိရနေပါတယ်နော် နေကောင်းအောင်နေနော် တာ့တာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် 5:44pmတွင် နိုဝင်ဘာလ 6, 2013မှာ, ချက်ခန်းတာဝန်ခံ+! may la won !+အလင်းချစ်သူ ပြောကြားခဲ့သည်က… 5:15pmတွင် နိုဝင်ဘာလ 6, 2013မှာ, ချက်ခန်းတာဝန်ခံ+! may la won !+အလင်းချစ်သူ ပြောကြားခဲ့သည်က… ဘ****
လ၀န်းအိမ်လာမလည်လို့ဘီလူးကိုချိတ်ချိုးတယ်ဟွန်း 11:12amတွင် နိုဝင်ဘာလ 3, 2013မှာ, အထူးမန်ဘာ+!!!♥♥နှင်းဆီသခင်မ♥♥!!!+ ပြောကြားခဲ့သည်က… ကိုလေးအိမ်မှာကိုလေးနဲ့တူတူလာအိပ်မယ် နှင်းကိုဖတ်ထားပေးသိလားရန်ကုန်ကိုလာရင် ကိုလေးကို နှင်းအဲံ့လိုလေးဖတ်ပီကြိုမယ်နော်အာဘွားနော် ကိုလေး 9:12pmတွင် အောက်တိုဘာလ 30, 2013မှာ, ကျောက်ဘီလူး ပြောကြားခဲ့သည်က… ‌ကျေးဇူးတင်‌သငယ်‌ချင်း‌ရေ 1:08pmတွင် အောက်တိုဘာလ 30, 2013မှာ, Admin+!! ★♥Sky Heart♥ ★!!+ ပြောကြားခဲ့သည်က… 8:05pmတွင် အောက်တိုဘာလ 27, 2013မှာ, အထူးမန်ဘာ+!!!♥♥နှင်းဆီသခင်မ♥♥!!!+ ပြောကြားခဲ့သည်က… နှင်းလက်ဆောင်လာပို့တယ်နော် ကိုလေး အရာရာတိုင်း အဆင်ပြေပီ ပျော်ရွှင်နိုင်ါစေနော်ကောင်မလေးချောချောလေးခေါ်လာပေးမယ် ယောင်မတော်မလို့လေငှက်လေးတစ်ကောင်းလိုဘဲနှင်းကလေ လှတ်ယမှတ်လား နှင်းပုံလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့မယ်နော်
5:48pmတွင် အောက်တိုဘာလ 24, 2013မှာ, Admin+!! ★♥Sky Heart♥ ★!!+ ပြောကြားခဲ့သည်က… 12:12pmတွင် အောက်တိုဘာလ 24, 2013မှာ, +!! hlain yati+!! ပြောကြားခဲ့သည်က… လာလည်တယ်နော်သယ်ရင်ပျော်ရွှင်ပါစေ အမှတ်တရ စကားများ ရေးသားပေးကြခြင်း မရှိသေးပါ!
အမှတ်တရ ရေးပေးကြသောသူငယ်ချင်းများ၏ ရင်ထဲက စကားများအားလုံး ကြည့်ရန်
မြန်မာ ဟာသ ကျောက်ဘီလူး တင်သွင်းခဲ့သည် 1 မှတ်ချက်
စွယ်တော်ရွက် မနော ကျောက်ဘီလူး တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
Nay Myo - Ta Nayt Nayt [Myanmar MP4] ကျောက်ဘီလူး တင်သွင်းခဲ့သည်3မှတ်ချက်
Flashsongs များ ကိုကော်မန့်ပေးရန်ကုတ်
</center> <br><br /><br />
aungkhant အခု အချိန်တွင် ရှိနေသည်
+ ဥယျာဉ်မယ်♥+♥နေမင်းချစ်သူ အခု အချိန်တွင် ရှိနေသည်
အိမွန်မွန်မောင် အခု အချိန်တွင် ရှိနေသည်
အထူးမန်ဘာ++♫♥နန်းနှင်းမိုး♥♫++ အခု အချိန်တွင် ရှိနေသည်
+တူးတူး4+ အခု အချိန်တွင် ရှိနေသည်
+ !! ♥ကိုကိုကြီး♥ဥယျာဉ်မုး♥+ !!
ကွန်ပြုတာ..Viber myanmar font
Android ဖုန်းများအား ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root ဖေါက်ပြီး မြန်မာစာထည့်နည်း
ကွန်ပျူတာကို မဟန်းအောင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ
တပည့်ဖြစ်သူ ၆ တန်းကျောင်းသားနှင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဆရာမ တာဝန်မှရပ်ဆိုင်းခံထားရ
ခဲချွန်ဓားနဲ့ ထိုးသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ခြောက်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် အား ရက်ရက်စက်စက်သက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်း
လူဆိုတာ ဘယ်ကစ အထီး၊ အမ ဘယ်ကစ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာဖွေမှု ဆဋ္ဌမမြောက်နေ့ ကမ္ဘောဇဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ရေငုပ်ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ သမ္ဗန်ပေါ်တွင် လိုက်ပါ၍ မေတ္တာပွားများ ရေငုပ်သူများ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ခေါင်းလောင်းတော်အားရှာဖွေမှုပြုလုပ်
ဟာသ အတိုအတွာများ(၂) (venuslay)
ဟာသ အတိုအတွာများ(၃) (venuslay)
ဟာသ အတိုအတွာများ(၁) (venuslay)
ရုတ်တရက် သွေးနီရောင် ပြောင်းသွားတဲ့ မြစ်တစင်း (venuslay)
အလွမ်းခ………ရဲ့ *--- တစ်နေ့တာ အလွဲများ ----*
ဘဝမှာ မည်သူ့ကိုမျှ မနှိမ့်ချပါနဲ့
စပယ်ပန်းသို့ သင်းပျံ့စေ .......
နှင်းဆီပန်းသွင် လှစေချင် ....
သူနဲ့ အလောင်းအစားမလုပ်မိစေနဲ့ နော်
Feedjit Live Blog Stats ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ
Link-1 ၊ Link-2 ၊ Link-3